UZuma uzobhekana nemibuzo ngokuzuza komndeni, iSABC noManana | News24
UZuma uzobhekana nemibuzo ngokuzuza komndeni, iSABC noManana
Cape Town – UMengameli Jacob Zuma kulindeleke ukuthi abhekane neminye imibuzo ePhalamende ngoLwesine uma ngabe esevela kulona ukuzophendula imibuzo nokuyinto ayenza kanye ngekota.
UZuma wenza konke okusemandleni ukugwema imibuzo enzima ngesikhathi egcina ukuvela ngomhlaka-22 Juni, ngosuku olufanayo lapho iNkantolo yoMthethosisekelo yanquma khona ngemithetho kanye nokusetshenziswa kwevoti eliyimfihlo.
Kulokhu, uZuma, kulindeleke abhekane neminye imibuzo eyisithupha, nebandakanya imibuzo elula evela kumaLungu ePhalamende e-African National Congress, kanye nemithathu evela kumaqembu aphikisayo.
OLUNYE UDABA: UDlamini-Zuma ‘unengwa’ abathi ufuna ukuvikela uZuma ekushushisweni
Umholi weDemocratic Alliance, uMmusi Maimane, kulindeleke ukuthi abuze imibuzo emibili ngoLwesine. Owokuqala umayelana nokuzuza komndeni.
UMaimane ubuza ukuthi uZuma, noyinhloko yeKhabhinethi, wake wawukhipha yini umyalelo noma waba nomthelela kunoma ngabe yimuphi umnyango kahulumeni noma inkampani ukuthi inikeze imisebenzi kumalungu omndeni asondelene naye nakude, noma amabhizinisi ahlangene nezihlobo.
Umbuzo kaMaimane wesibili ubuza ukuthi kungani uZuma ebambezeleke isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezintathu ukusayina ukugunyaza ukuthi iSpecial Investigating Unit (SIU) iphenye iSABC.
INhloko ye-SIU, uLekhoa Mothibi, yasho ngoMeyi ukuthi isikulungele ukuqala uphenyo kulo msakazeli womphakathi ogubuzelwe yizinkinga, kodwa uZuma uze wasayina ukugunyaza lolu phenyo ngomhlaka-25 ku-Agasti, sekudlule izinyanga ezintathu.
Ukuhlala kwePhalamende kuzoqala ngo-14:00.